Maro no efa miasa, fa tsy vitsy koa ireo olana tokony ho vahana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ekena fa maro ireo ezaka natao ho an’ny tanora, na avy amin’ny fanjakana izany na nataon’ireo tsy miankina. Anisan’ireo ezaka ankehitriny ohatra ny nampidirana izany anatin’ny Plan Emergence de Madagascar (PEM). Ankoatr’ireo vokatra azo tamin’izy ireny, izay mety ho nahafa-po ny mpiantsehatra na tsia, dia tena ilaina ny mandrefy ny fiatraikany eo amin’ny tanora. Ny mahavita hetsika fotsiny tsy ampy, fa ny hampisy akony amin’ny fisitrahan’ny tanora maro an’isa no tena ilaina. Sombintsombiny ihany amin’ireo fanamby lehibe anton’izao sisi-kevitra izao koa atsipinay ny teny ho an’ireo tompon’andraikitra isan’ambaratonga, mba hahatonga ireo tanora 8 tapitrisa mahery ho tena fanoitr’ity firenena ity tokoa, ary hahatonga azy ireo hanana fanantenana azo antoka amin’ny ampitso, izay efa tena akaiky. Rahampitso sy afaka 10-20 taona izy ireo dia tokony ho mpiantsehatra mahefa amin’ny fandraisana anjara ara-politika, sosialy, fihariana, kolotsaina, ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina ankapobeny. Afaka 20-30 taona kosa dia mba hioty ny vokatr’izany fisasarany izany, hiaina finaritra, ho ela velona ary hamela mamy ho an’ny zanaka amam-para. Ny taranaka aorian’izy ireo avy kosa dia mendrika handova tontolo azo iaingana ho amin’ny tsaratsara kokoa hatrany. Ireo fanamby lehibe.
Ny tokony ho fanontaniana lehibe apetraka dia hoe “atao ahoana ny famolavolana tanora ho tonga tompon'andraikitra amin’ny tenany sy ny manodidina azy ary ny firenena?” Ny ilaina hiarahana mikaon-doha dia hoe:” inona avy ireo soatoavina tena iriantsika ho atsangana ho tanjona?”
Tena ilaina ny manana voka-pikarohana mahakasika ny lasa niainana sy ankehitrinin’ireo sokajy 30 taona, mba hahafahana mamaritra izay banga sy tohana hilaina. Sosokevitray ny hanaovana fikarohana matotra sy lalina ary fampanjariana (capitalisation) ireny loharanom-pahombiazana (facteurs de réussite) ireny hisintonana zotra enti-mampandroso ny tanora.
Mila lasitra (politikam-pirenena) matanjaka, miainga avy eny ifotony, ary mirindra tsara amin’ireo politikam-pampandrosoana isan-tsokajiny (asa/emploi, travail; kolontsaina, mahaolompirenena, fahasalamana sy ny sisa) ny famolavolana tetik’asa ho an’ny tanora. Raha tsy izany dia vokatra maivana, mandalo ary vitsy mpisitraka no ho azo.
Mila tombana ohatra ny politikam-pirenena ho an’ny tanora.
Ireto ny andininy vitsivitsy voakasik’izany: mametraka ny tanora ho loharano stratejika ho an’ny fampandrosoana: nanao ahoana ny fanatontosana izany tamin’ireo politika ankapobeny ho an’ny firenena? Ahoana ny fampanjariana ireo soatoavina voalaza ao amin’ireo drafitr’asa isan-tsokajiny? Nanao ahoana ny fahatrarana ireo tanjona voalaza ao? Ny tombana izay natao tamin’ny alalan’ilay tetik’asa tombana ho an’ny tetibola, izay niarahana tamin’ny firaisamonim-pirenena CCOC dia nahitana fa tsy mbola misy ilay drafitr’asa dimy taona. Na dia nisy fotoana aza nanaovana atrik’asa momba azy io. Misy fakan-kevitra kasaina hatao amin’izao telovolana voalohany izao momba izany. Tsy tokony hirotorotoana ary tsara raha atao malalaka ny fandraisana anjara amin’izany. Ireo no lafiny teknika (méthodologie) tsy maintsy azo antoka raha te hanana paik’ady mitombina isika. Tsara tombanana ny fandraisana anjaran’ireo vondrombahoaka itsinjaram-pahefana sy ireo rafitra eny ifotony amin’ny fampandrosoana ny tanora. Ilaina ny mampatsiahy fa ireo faritra 22 (na 23) misandrahaka amin’ireo kominina 1695 dia rafitra fampandrosoana ifotony? Ilaina jerena koa ny fandrindrana ireo mpiantsehatra ho fanasongadinana kokoa ny tombontsoan’ny tanora; Amafisina ny sosokevitra niarahana tamin’ny CCOC, dia ny hisiana sehatra ifampidinihina maharitra ao anatin’ny fomba fiasan’ny departemanta misahana ny tanora sy any amin’ireo vondrona sy rantsa-mangaika sahaniny.
Fisainana tsy mahataka-davitra, mitsingilahila, feno fanahiana
Iraka neken’ny Observatoara Momba ny Tanora sy ireo mpiray tambajotra aminy ny fanaovana sisikevitra. Izany dia miainga amin’ny faharesen-dahatra fa ny hevitry ny maro no mahataka-davitra, tsy mitsaha-mivoatra koa ny toe-javatra rehetra ary samy tompon’andraikitra amin’ny fampandrosoana, na ankapobeny io, na mahakasika ny tanora manokana ny olompirenena. Ny adidy tokoa hono mantsy tsy an’olon-dratsy ary ny tao-trano tsy efan’ny irery koa raisinay ho adidy izao sisikevitra izao, izay miainga avy amin’ny fandalinana ny zava-misy isan-taona. Tsy ho sasatra ny hamerina izany izahay raha mbola ilaina, satria atosiky ny faniriana mba hananan’ity Madagasikara ity tanora andry azon’ny firenena ianteherana ankehitriny sy amin’ny ho avy, ary mba ho fanoitry ny fampivoarana sy mpikatroka ho an’ny hiadanan’ny ambanilanitra anie izy ireo. Ny tanora ankehitriny raha oharina amin’ny famaritana ao amin ‘ny politikam-pirenena momba ny tanora dia ireo 30 taona noho midina no antsoina hoe tanora. Ny kajy tsotsotra nataonay dia ahitana fa manana olombelona tanora eo amin’ny 8,731,316.285 i Madagasikara. Araka ny fiteny hoe “ny olona no harena”, dia azo antoka fa tombony lehibe ho an’i Afrika, sy i Madagasikara manokana ny hatanorany. Ireo tanora ankehitriny ireo dia zanaky ny taona 90. Mby an-tsaina avy hatrany, etsy andaniny, ny fahaterahan’ny teknolojiam-pifandraisana vaovao izay azo antoka fa misy akony any amin’ny fomba fisainan’ireo tanora mponina andrenivohitra indrindra indrindra, ary manomboka mihitatra hatrany amin’ireo faritra lavitry ny tanan-dehibe. Misy sokajin-tanora maro anefa tsy afaka nanararaotra izany noho ny antony samihafa, ka nanjary fahavoazana ho azy ireo izany. Ireo krizy ara-politika telo (1991, 2002, 2009) sy ny fiantraikany avy koa, mivantana na ankolaka, dia sady nanefy fisainana tsy mahata-kadavitra, mitsingilahila, feno fanahiana, matahotra andraikitra, mpikatsaka kokoa ny ho an’ny tena mihoatra ny ho an’ny iombonana sy ny firenena, no niteraka fikorontanana teo amin’ny tontolo manodidina sy ny rafitra ankapobeny iainany. Ny fitambolombolon’ny fanantenana sy ny fahadisoam-panantenana isak’izay misy hetsi-panovana ohatra, dia nahatonga ny toetra manidintsidina sy miovaova. Manampy izany ny fitotonganan’ny fihariana ka sady nahatonga fahasarotana teo amin’ny fahafahana mandranto fahaizana, izay andraikitra sahanin’ny raiamandreny aloha hatramin’io taona io no nanamatroka ny tontolo ivelaran’ny tanora maro tamin’ny ankapobeny.
Araka izany dia tena ilaina ny manana voka-pikarohana mahakasika ny lasa niainana sy ankehitrinin’ireo sokajy 30 taona, mba hahafahana mamaritra izay banga sy tohana hilaina. Ny fahombiazana mantsy dia tsy miankina amin’ny ankehitriny ihany, fa ny lasa koa, ary ny fahafantarana ny zavatra niainany (vécu) dia mety hahitana ny lojika amin’ny fomba fiheviny sy ny sedra lalovany.
Manamora ny fampivoarana ny fiaingana amin’ny fijerin’ireo voakasika. Na izany aza, mahavelombolo ny mahita tanora maromaro misongadina noho ny ezaka nataony, ny tosika isan-tsokajiny na koa ny tontolo misy azy ka nahafahany nivelatra sy nihoatra ireo sakana tsy afaky ny maro. Sosokevitray ny hanaovana fikarohana matotra sy lalina ary fampanjariana (campitalisation) ireny loharanom-pahombiazana (facteurs de réussite) ireny hisintonana zotra enti-mampandroso ny tanora. Ny lamina sy paik’ady fampandrosoana ny tanora eto Madagasikara. Tsy vao omaly fa efa taona maro izay i Madagasikara no nanana tetika fampandrosoana ny tanora. Ankoatr’ireo sehatra tsy miankina sy ara-pinoana, izay nanana drafitra fitaizana ny tanora (fampianarana, fanatanjahan-tena, kolotsaina sy ny sisa), hatrany amin’ny taonjato faha-mpanjaka, dia nanana rafitra ara-pitantanana mazava ihany koa isika. Ny akaiky indrindra, ny fisian’ny minisitera misahana manokana ny tanora eo anivon’ny governemanta, ny fisian’ny rafitra maharitra famatsiambola toy ny TAFITA 9 na Tahiry Aina ho an’ny Fanatanjahantena sy Itsinjovana ny tanora izay manana tahiry avy amin’ireo hetra antsoina hoe “parafiscales”, izany hoe avy amin’ny fivarotana ireo vokatra manimba fahasalamana toy ny alikaola sy ny paraky 80% n’ny vola miditra ao no avy amin’izay ary ny 20% kosa dia avy amin’ireo vola hofana fotodrafitr’asa ara-panatanjahantena, izay ny TAFITA no miandraikitra azy. Ankoatr’ireo, ny mbola ao anatin’ny minisitera misahana ny tanora ihany ny Institut National de la Jeunesse (INJ) izay misahana ny fanofanana ireo teknisiana sy tompon’andraikitry ny “hatanorana “Malagasy. Amin’ny fampianarana, ny ambaratonga faharoa fototra dia mikarakara tanora 114 73910 eo ho eo, ary ny ambaratonga ambony dia 85 54811. Isaky ny minisitera dia matetika misy programa na tetik’asa mahakasika ny tanora, toy ny Projet jeunes entreprises rurales dans le Moyen-Ouest (PROJERMO) na ny Projet des Jeunes Entrepreneurs Ruraux (PROJER), izay famatsiambola ho an’ny tanora mpamboly avy amin’ny Banky Afrikana ho an’ny fampandrosoana. Mbola maro ireo tetik’asa tsy voalaza toy ny PAPAM, PADAP, DEFIS, PROSPERER ary koa ny FORMAPROD izay manana tanjona manokana mahakasika ny tanora. Ireo rehetra ireo no mahatonga anay hanisikevitra ny: hanaovana tombana amin’ny fahombiazan’ny hetsika sy rafitra tsirairay, ary ny hamolavolana zotra vaovao (plan, politique) mampifameno (synergie), mifanaraka kokoa amin’ny zava-misy ankehitriny (pertinence) ary voadinika tsara. Tsy adino koa ireo komisiona misahana ny sosialy sy ny tanora any amin’ireo parlemanta. Ary farany, isaky ny vondrona firaisamonim-pirenena dia matetika ahitana sampana na komisiona na programa momba ny tanora. IV- Ahoana no hampandrosoana ny tanora ankehitriny? Tsy azo nolalovam-potsiny ireo voalaza tery aloha ireo, satria azo antoka fa hahafahana manazava ny zava-misy iainan’ireo tanora ankehitriny. Ankoatr’ireo fitaovana naroso dia ireto no heverina fa laharam-pahamehana raha tiana ny hanarina ny raharaha.
Maro karazana ireo mpiantsehatra, toy ny fiangonana, ny fikambanana tsy miankina na tsia, ireo vondrona sy sampana, ny fanjakana mazava ho azy ary koa ireo masoivoho vahiny. Indrisy fa tsy mifanentana amin’ireny hetsika natao ireny ny fivoaran’ny tanora. Heverinay fa ireto no anton’izany: - Samy miezaka hanao ny azy, mifanaraka amin’ny tanjony manokana ireo mpiantsehatra, ka tsy hita taratra amin’ny tontolo ankapobeny ny fiatraikany. Ilaina noho izany ny fampifanojoana sy fandrindrana ireo hetsika sy vina rehetra. Ilana fifandresen-dahatra izany mba hisian’ny fifamenoana. Saika tetik’asa novatsian’ny avy any ivelany ny ankamaroan’izy ireny ary ny tetik’asa amin’ny maha izy azy dia tsy natao haharitra. Ny tsy fitohizan-draharaha (continuité) dia mampahazo vokatra tsy maharitra fa mandalo fotsiny ihany. Vitsy amin’ireo tetik’asa, na ny nataon’ny fanjakana na ny nataon’ny tsy miankina no natao fakan-desona (capitalisation) sy nifampizarana (partage), hany ka toy ny niainga vaovao hatrany isak’izay misy tetik’asa vaovao.
Tena ilaina ny fisintonan-desona (capitalisation) ary tsy tokony hijanona eo amin’ny tompon’antoka voalohany izany fa ifampizarana malalaka ho an’ny rehetra (diffusion). Ilana fomba fiasa matotra sy eken’ny rehetra izany mba hanatsarana zavatra sy hampandroso hoy Lanto Ratsida, Filohan’ny Observatoire de la jeunesse eto Madagasikara, izay niatrika ireo mpanao gazety tamin’ny valan-dresaka nataony.
Ny tanora sy ny hamehana ara-pahasalamana : Misy ihany ireo lafi-tsaran’izao fihibohana izao - il y a 19 jours